Huteelada Caalamka hogaamiya ayaa magacaabay Madaxweyne cusub iyo Madaxa Fulinta ee Fulinta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Huteelada Caalamka hogaamiya ayaa magacaabay Madaxweyne cusub iyo Madaxa Fulinta ee Fulinta
Andorra Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
The Huteelada Hormuudka ka ah Dunida, Ltd (LHW) ayaa maanta ku dhawaaqay in Guddiga Fulinta, oo ka kooban toddobo hudheello LHW ah, ay u magacaabeen Shannon Knapp inuu noqdo Madaxweynaha iyo Madaxa Fulinta ee soo socota, isla markaaba laga bilaabo. Knapp, oo la wareegtay mas'uuliyadaha hoggaamineed ee shirkadda bishii Abriil si ku meel gaar ah, waxay hore u soo noqotay LHW Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare iyo Sarkaalka Suuqgeynta in ka badan shan sano.
"Shannon waa hogaamiye xoog leh, wax ku ool ah oo qiime leh oo horseed u ah istiraatiijiyadda iyo hal-abuurnimada shirkadda tan iyo markii ay ku soo biirtay 2013," ayay tiri Andrea Kracht, Guddoomiyaha, Guddiga Fulinta, Hoteellada Hoggaaminaya Adduunka iyo Milkiileyaasha, Baur au Lac. “Markii aan xilal fulineed ka hayay LHW in ka badan lix sano, Shannon waxay faham qoto dheer ka leedahay ganacsigeenna. Waxay sidoo kale leedahay khibrad ballaadhan oo ku saabsan safarka ballaaran ee raaxada. Guddiga Fulinta wuxuu si aad ah ugu kalsoon yahay in iyada ay tilmaamayso, LHW ay sii wadi doonto hogaaminta warshadaha martigelinta madax-bannaan ee madax-bannaan.
Shannon Knapp, Madaxweynaha & Madaxa Fulinta, “Huteellada Hoggaaminaya Dunida” ayaa si aan caadi ahayn u sharfay oo aan u khushuucay fursadda aan ku hoggaamin karo hay'addan caanka ah, ee ay xubintu iska leedahay. “Waxaa abuuray mulkiileyaasha hoteelada, in ka badan 90 sano ka hor, LHW waxay wali u heellan tahay xoojinta guusha xubnaheeda hoteellada madaxa bannaan iyo hubinta qaybtan aan caadiga ahayn ee soo dhoweynta raaxada ah inay sii socoto. Aad ayaan u jecelahay howshan waxaanan u waxyooday inaan la shaqeeyo hudheellada cajiibka ah ee 430-ka ah ee ururintayada ka jira iyo shaqaalaha aan caadiga ahayn ee LHW si ay u sii wadaan himiladaas. ”
Tan iyo markii loo qaatay mas'uuliyadaha hoggaamineed ee agaasimaha guud ee ku-meel-gaarka ah, Knapp waxay shirkadda ku hagtay iyada oo loo marayo kala-guur hoggaamineed oo guuleysta waxayna bilowday inay dardar geliso xawaaraha shirkadda ku dhowaad dhammaan qeybaha muhiimka ah ee ganacsiga. Intii lagu gudajiray waqtigan, waxay sidoo kale cadeysey aragtida istiraatiijiyadeed ee LHW iyo istiraatiijiyadda ganacsiga ee mustaqbalka cusub ee shirkadda.
Doorkeeda Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare iyo Sarkaalka Suuqgeynta Sare, Knapp waxay horseedday sumcad horumarineed iyo istiraatiijiyado suuq geyn xogta ku saleysan, waxay beddeshay waayo-aragnimada macaamiisha, iyo dardargelinta sumcadda shirkadda. Knapp wuxuu kormeeray qeybaha kala duwan ee suuq geynta LHW wuxuuna mas'uul ka ahaa dib u habeynta iyo 2018 dib u soo celinta deegaanka hogaamiyeyaasha hudheellada daacadnimo, Hogaamiyaasha Naadiga, oo ah barnaamij ay aqoonsan tahay Condé Nast Traveler oo ah "inay ku siiso badeecado noocyo kale ah hoteellada waaweyn ee waaweyn. faa'iidooyinka. "
Intaa waxaa sii dheer, waxay dhistay falanqaynta suuq-geynta iyo aragtida macaamiisha si ay u wado isbeddel ku yimaada adeegsiga xogta si loogu wargaliyo istiraatiijiyadda suuq-geynta, taasoo keentay kororka wax-ku-oolka suuq geynta iyo malaayiin doollar oo dakhli kordhin ah.
Knapp sidoo kale waxay kahelaysaa khibrad safar oo qaali ah 15-kii sano ee ay kusugneyd American Express, halkaas oo ay fursad ugu heshay inay ka shaqeyso qeybaha safarada ee Corporate iyo Leisure labadaba, maareynta barnaamijyada safarka raaxada, la-hawlgalayaasha iyo faa'iidooyinka xubnaha Platinum iyo Centurion Card iyo isutaga safarka ganacsi.
“Shannon suuqgeynta adag iyo khibrada macaamiisha waxay u sahlaysaa LHW inay sii xoojiso xooggeeda isku xidhka socdaalayaasha xiisaha leh kuwaas oo qadarinaya sheeko aan caadi ahayn oo istaahila xilliyada safarka iyo mulkiilayaasha hudheellada ku nool si ay u farsameeyaan,” ayay tiri Kracht Magacaabista Shannon waxay soo bandhigi doontaa aragti cusub oo ku saabsan ganacsigeenna oo dib u qeexi doonta doorka LHW ee xoojinta guusha xubnaheeda. ”